Lubnaan oo xukuumad cusub loo dhisay ka dhib oo dhicistii xukuumadii Xariiri – SBC
Lubnaan oo xukuumad cusub loo dhisay ka dhib oo dhicistii xukuumadii Xariiri
Posted by editor on June 14, 2011 Comments
Beirut:-Xogahayaha guud ee madaxa golaha wasiirada Lubnaan ninka lagu magcaabo Suhayl Buuji ayaa shaaca ka qaaday dhisitaanka xukuumad cusub oo uu madax u yahay Najiiib Miiqaati, .shan bilood kadib dhicitaankii xukuumadda hore.
Mr Miiqaati oo kalmad jeediyey kadib markii lagu dhawaaqay xukuumadda ayaa sheegay in uu ka shaqeyn doono xoojinta qaranimada iyo madaxbanaanida Lubnaan iyo xoreynta dhulka Israel ka haysato dalkiisa iyo in dib loogu laaban doono wadahadalo ku dhisan ilaalinta dustuurka iyo xeerarka dalka Lubnaan.
Miiqati ayaa carabaabay in xukuumadiisu ay ku shaqeyn doonto hal ku dhig ah ” dalka anagaa iskaleh shaqadana anagee inoo taalaa” maadaama Lubnaaniyiintu ay ka quusateen hadal ayna doonayaan waxqabad.
Miiqaati ayaa soo hadal qaaday dhacdooyinka kajira dalalka carabta wuxuuna tilmaamay in xukuumadiisu ay wax ka qaban doonto dhaqaalaha islamarkaana ilaalin doonto cilaaqaatka dhamaan dalalka Carabta iyadoo la eegayo masalaxa guud ee dalka Lubnaan.
Miiqaati ayaa carabaabay in xukuumadda cusub ay u siman yihiin dhamaan mucaaradka iyo muxaafidka maadaama ay tahay xukuumad ay dhistayn lubnaaniyiinta una shaqeenaysa lubnaaniyiin dartood.
Xukuumadda cusub ayaa ka kooban 30 wasiir 19 kamid ah ay yihiin kooxda lagu magcaabo 8 maarso iyo 11 wasiir oo u dhow dhow madaxweyne Miishal Suleymaan iyo raa’iisal wasaare Miiqaati iyo waliid Junbulaad oo gacan saar la leh ururka xisbullah.
Dhistaanka xukuumadan cusub ayaa ku soo beegmaysa shan bilood kadib dhicitaankii xukuumadda Sacad Al-xariiri kadib markii uu cadaadis uga yimid ururka Xisbullah iyo xulafadiisa sababa la xiriira khilaaf ku aadan maxkamadda caalamiga ee u gaarka ah baaritaanka arrinta ku aadan dilkii ra’isal wasaarihii hore ee dalka Lubnaan Rafiiq Al-xariiri sanaddii 2005.
Sidoo kale kooxda 14 maarso oo uu madaxda ka yahay Sacad Al-xariiri ayaa ku gacan seertay in ay ka qeyb gasho xukuumadda cusub.